Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay in la xaliyey Tabashadii Baarlamaanka ee Mushaar la’aanta – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa ka hadlay Khilaafka Baarlamaanka iyo Xukuumadda, Tababar u socda Baarlamaanka, Colaad beeleedyada Hirshabeelle iyo ka bixitaanka Ciidamada AMISOM ee Hirshabeelle.
Wareysiga oo dheer ayuu kaga hadlay arimo badan oo degaanka ka jira ayuu waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal loogu heli karo oo kaliya isku duubni iyo midnamada Hirshabeelle. Guddoomiyaha ayaa baaq u jeediyay shacabka iyo Maamulka Hirshabeelle hey’adahiisa kala duwan baaqaas oo ah in lawada shaqeeyo layskuna tanaasulo.
Sheekh Cusmaan Barre ayaa beeniyay in uu dhowr-jeer baaqday Kulamada Baarlamaanka Hirshabeelle, balse waxa uu qiray in maalmo aan badneen fadhiga uu baaqday kadib markii uu kooramka u buuxsami waayey. Waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya in Xukuumadda ay ku lug leedahay baaqashada fadhiyada qaar ee Baarlamaanka.
“Ma jirto kulamo baarlamaan oo u baaqday faragelin Xukuumadda waana been wararka sheegaya in Xukuumadda ay ka dambeysay kulamo aan badneen oo u baaqday Kooramka oo buuxsami waayay”, ayuu yiri sheekh Cusmaan Barre
“Baarlamaanka oo dhan waxaa u socda Tababar, fadhiyada inta badan sababtaas ayey u qabsoomi waayeen, Sabtiada ayey toos u furmi doonaan kulamada baarlamaanka”, ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in la xaliyay tabashadii ay qabeen Baarlamaanka ee ku aadaneed dhinaca Mushaarka, taas oo khilaaf ka dhax-abuurtay Xukuumadda iyo Baarlamaanka sida uu hadalka uu dhigay.
“Kulamo hoose oo dhacay ayaa lagu xaliyay cabashadii baarlamaanka, hadana wali waa socotaa xalinta arintaasi”, ayuu Kalfadhi u sheegay Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle “Arinta ka bixitaanka Ciidamada AMISOM waan ka war-heynaa aad ayaana ula soconaa, waxay nagu heysaa walaac”, ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Cusmaan Barre.
Furitaanka Kalfadhigaan 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle Guddoomiyaha Baarlamaanka waxa uu ballan qaaday in ay kaga hadli doonaan arimaha dagaal beeleedyada ayna ka soo saari doonaan xeerar sida uu hadalka u dhigay, mar aan su’aahaasi weydiinay ayuu ku jawaabay.
“Ajandahaas baarlamaanka ayuu horyaalaa waxaana ka soo saari doonaa go’aano wax looga qabto dagaal beeleedyada oo aan dhib badan ku qabno”, ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre.
Muddo kabadan laba Isbuuc ayaa waxaa hakad ku jiray kulamada Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle. Qaar kamid ah Xildhibaanada Maamulka Hirshabeelle ayaa maalmahaan Jowhar shirar ay ku qabteen waxay ka sheegayeen Kulamada Baarlamaanka ay u qabsoomi la’yihiin Xukuumadda oo Xildhibaanada ka dhigtay Wasiiro kadibna ku ammartay in aysan xaadirin fadhiyada Baarlamaanka.